Uhlu lwezinombolo zocingo lwebhizinisi laseNdiya | Izinombolo Zeselula | Database lakamuva
Uhlu lwefoni lwe-Indian B2B
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu lwefoni lwe-Indian B2B
Izinombolo zocingo ze-Indian B2B
Uhlu lwefoni lwe-b2b lwaseNdiya lubandakanya yonke uhlu lwezinsizakalo zocingo lomuntu waseNdiya noma uhlu lwezinombolo zocingo. Inombolo yohlu lwefoni yaseNdiya iqukethe igama lokuxhumana lomuntu webhizinisi, ikheli, idolobha, ikhodi ye-zip, izinombolo zeselula noma zefoni. Futhi ungahlunga ngezinombolo zeselula noma izinombolo zefoni. Lolu hlu lwezinombolo zocingo lusiza kakhulu kwimakethi yokuthengisa ama-sms online noma imikhankaso yokuthumela izingcingo.
Uhlu lwefoni lwe-Indian b2b luhlanganisa izinombolo zocingo ezingokoqobo nezimsulwa kuphela. Uma uthenga uhlu lwefoni lwe-b2b yaseNdiya uzothola imiphumela emihle kusukela kuzinkomba. Uhlu lwamaselula eNdiya lukunikeza isilinganiso esihle sokuphendula wemikhankaso yakho ye-sms kanye nemikhankaso yocingo.
Thenga uhlu lwezinombolo zocingo lwebhizinisi laseNdiya
Uhlu lwefoni lwe-Indian B2B, uhlobo oluthile lwedatha ukufinyelela izinhloso zakho zomkhankaso we-telemarketing ezinqunywa yizinto ezahlukahlukene, okubandakanya imakethe yakho eqondiswayo kanye nabamukeli bemakethi be-sms, ukumaketha nge-imeyili kanye nomkhankaso wokubiza amakhaza.
Database Lokugcina Lokuposa ngumthombo wohlu lokuhola lwebhizinisi, ungaqiniseka ukuthi i-database yefoni yase-Indian B2B isesikhathini, inikezela ngemininingwane efanelekile mayelana namakhasimende athembekile ngentengo engabizi yohlu lwefoni yebhizinisi kodwa inganikeza imininingwane ephezulu kakhulu ukwenza ngcono ukuthengisa kwakho kwe-B2B okungasebenzisa ibhizinisi lakho.
Ukuthenga uhlu lwezinombolo zocingo lwe-Indian B2B, kuyindlela esebenzayo kakhulu yebhizinisi, noma ngabe uhlela ama-aphoyintimenti, uhlinzeka ngemininingwane, noma uthengisa ngqo ngocingo unenombolo yokwazi ukubhekisisa amakhasimende.
Uhlu lwefoni lwe-Indian B2B luqukethe amarekhodi angama-125,000 afakiwe ohlu lwezincwadi zebhizinisi olufinyelele ku- $ 750, inkokhelo yesikhathi esithile kanye nesoftware engalandelwa ngokushesha engaba uhlobo lwefayela le-Excel CSV.
Lolu uhlu olukhetha uhlu lwefoni lwe-B2B kusuka database yethu, oluqoqiwe futhi lwahlungwa ngabasebenzi bethu bocwaningo olunesiqinisekiso esikhulu. Uhlu lwefoni yebhizinisi okuqondiwe ngalo luyeza nedatha ebalulekile ongayisebenzisa ukukhulisa imizamo yakho yokuhlwaya. Gcina isikhathi sokubiza amathemba ngenxa yomthombo ohleliwe novuselelwe wezinhlu zocingo ze-Indian B2B.
Inombolo Yezinombolo Zebhizinisi LaseNdiya Umbuzo & Impendulo